Moto E4 Plus na-ere nkeji 100.000 ụbọchị nke mbụ ya na India | Gam akporosis
Moto E4 Plus na-ere nkeji 100.000 ụbọchị mbido ya na India
Izu gara aga, onye na-eme smartphone, Motorola, onye enyemaka nke ụlọ ọrụ Lenovo, tinyere Moto E4 Plus a na-atụ anya ya ogologo oge na India na, dị ka ọnụ ọgụgụ ahịa ndị ahịa n'oge mbụ, ọ na-egosi na ọ bụ ihe na-ewu ewu na mba ahụ.
Ihe ọhụrụ Moto E4 Plus bụ maka ọrịre naanị site na Flipkart yinye ebe a gaara ere ihe karịrị 100.000 puku n'ime awa 24 mbụ nnweta.
Flipkart agwawokwa na, n'oge awa mbụ nke ngwaọrụ ahụ, e rere ha 580 Moto E4 Plus nkeji kwa nkeji, na mmadụ 150.000 na-eleta peeji ahụ n’oge ahụ.
Otu n'ime atụmatụ kachasị dị iche iche nke ọhụụ Moto E4 Plus bụ nnukwu batrị nwere nnukwu ikike 5.000 mAh ekele nke ndị ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ nnwere onwe ka ukwuu echere. Na mgbakwunye na batrị ahụ dị ike, Moto E4 Plus nwere a 5,5 nke anụ ọhịa ahụ HD ihuenyo jiri curved iko ya 2.5D n'akụkụ mgbe n'ime ọ na-akpali site na MediaTek MT6737 processor na-esonyere 3 GB nke RAM y 32 GB nke nchekwa dị n'ime nke, n'ezie, enwere ike ịgbasa site na kaadi microSD ruo ihe ọzọ 128 GB.
Na ngalaba vidiyo na foto, Moto E4 Plus nwere igwefoto isi ya na 13 MP mmetụta, Ikanam flash na f / 2.0 aperture, mgbe igwefoto n'ihu na-etinye ihe mmetụta sensọ 5 MP.
Emechara atụmatụ ya site na igwe ahụ nwere ihe mmetụta mkpịsị aka n'ihu na Android 7.1.1 Nougat dị ka sistemụ arụmọrụ
El ekwentị ọhụrụ dị na ọnụahịa nke, 9.999, nke dị gburugburu 136 euro na nke ugbu a ọnụego mgbanwe, na-awa na abụọ risịrị, Iron Gray na Ọma Gold (ígwè isi awọ ma ọ bụ ezi gold karị).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Moto E4 Plus na-ere nkeji 100.000 ụbọchị mbido ya na India
Ebee ka ịzụta mobiles ndị China
Nweta LEAGOO T5 ichekwa $ 70